Ihowuliseyili spandex ikhava yetafile yecocktail yomnyama okanye emhlophe yomtshato okanye yesidlo uMvelisi kunye noMthengisi | Jianye
Isembozo setafile yecocktail emnyama emnyama okanye emhlophe ethengisa iivenkile yomtshato okanye yesidlo
Ilaphu leDamask, spandex / Lycra
Banokubulawa, engangenwa ngeoyile, manzi
Isidlo, Ikhaya, Ihotele, Ngaphandle, Ipati, Umtshato
mhlophe, mnyama, luhlaza kunye nobomvu
Iiyunithi ezingama-50000 / iiYunithi ngenyanga nganye
ipc enye kwingxowa enye yeephe kunye neekhompyuter ezingama-50 kwibhokisi engaphandle
Umzekelo No I-HY-RTC
Igama lebrand HY
Izinto eziphathekayo Umgangatho we-spandex ilaphu, i-10% ye-lycra + i-90% ye-polyester, ilaphu ziindlela ezi-4 ezoluliweyo
Ingubo ye-GSM Malunga ne-200g / m2
Umbala mhlophe, mnyama kwaye bomvu (sinokwenza nawuphi na umbala ofumanekayo kwitshathi okanye umbala odayiweyo)
Ubungakanani beTafile 80 * 110cm
yenza ngokwezifiso Ewe
Kwamkelwe i-OEM Ewe
Ukusetyenziswa Isidlo, umtshato, ikhaya okanye indawo yokutyela
Uncedo Beka ngokulula / ukucima, ukuhlala ixesha elide, umbala othandekayo, eyona ndleko isebenza kakuhle, imibimbi yasimahla, ukuziva kuthambile kwesandla, ukuncipha
Iindleko zesampulu isampula yasimahla kunye nesampulu yokuthuthwa ngumthengi ngokuhlawula
Sample Ixesha Lead malunga neentsuku ezi-5
Ixesha leMveliso malunga neentsuku ezili-10
Intlawulo I-30% ye-TT kwangaphambili kunye ne-70% ye-TT ngaphambi kokuhanjiswa kweempahla, i-100% ye-TT kwimbonakalo
Iintshayelelo Sinokwenza ubungakanani ngokuchanekileyo, kuba sinobungakanani beetafile ngokucocekileyo
1. zinike isampuli simahla ukuqinisekisa
2.Ngokweemfuno zabathengi ukuyila kunye nokuvelisa
Amaxwebhu okuthumela kunye nokuthumela ngaphandle
4. Emva kokuthengisa inkonzo yokulandela umkhondo
I-Shaoxing Jiangye iimveliso zangaphandle co., Ltd ngumenzi wobuchwephesha kuzo zonke iintlobo zeemveliso zefanitshala zeplastiki ezifumaneka eShangyu Yonghe kwiZowuni yezoShishino, kwimpuma yePhondo laseZhejiang, China. Le ndawo yi-50KM kuphela kude ne-Ningbo Port, kunye ne-200KM esuka eShanghai Port, apho ifumana ukufikelela ngokulula kunxibelelwano. Inkampani sele ifumene izixhobo zobugcisa obuphezulu, ezinje ngomlawuli weflan yomatshini wokubetha ngeplastiki ukusuka ku-500g ukuya ku-15000g, umatshini ojijekileyo kunye nomatshini wokulungisa. Ezona mveliso ziphambili eHongye zitafile, izitulo kunye neebhentshi zangaphakathi nangaphandle, ezamkelwa ngabo bonke abathengi kwihlabathi liphela.
Umgangatho, ukwenziwa kwezinto ezintsha kunye nodumo sisiseko seshishini elisekwe. Zonke iimveliso e-Hongye zinokuthathwa njengokumgangatho ophezulu kunye noyilo oluhle. Imizobo okanye iisampulu zeemveliso ezihlanganisayo ezivela kumazwe kwihlabathi liphela zamkelwe. Masidibane, senze ikamva lihle kwaye liqaqambe.
1.yintoni inzuzo iHDPE eluhlaza ekrwada xa ithelekiswa nezinye izinto, ezinje ngePP, ABS?
Yenza iitafile zomelele, zibe lula, kwaye zomelele ngakumbi kwaye zingathathi kancinci, kulula ukuzicoca, kulula ukuziphatha, ukuseta ukuseta.
2.yintoni itekhnoloji yokuvelisa imveliso?
Ukuvuthela ukungunda kunye nesakhelo sesinyithi esigutywe ngumgubo
3.Ide kangakanani iwaranti yemveliso kwaye ndilifaka njani ibango?
unyaka omnye ngendlela echanekileyo oza kuyisebenzisa
4.How malunga MOQ
Isingxobo se-1 * 40HQ ungaxuba zonke iintlobo zeetafile kunye nezitulo, kodwa ukuba zingaphantsi kwe-1 * 40 HQ, kwisitya se-20GP, umthengi uya kuhlawulisa i-USD250 yangaphakathi.
5.How malunga OEM kunye noshicilelo logo?
I-OEM ilungile, ukuba sifumana ileta egunyazisiweyo yophawu lwentengiso yomthengi, siya kuyikhulula ilogo yokuprinta ukuba ubungakanani beodolo bukhulu
6.yintoni intlawulo kwaye uzifumana njani iimpahla ezivela eChina?
Ukuhlawulwa kwangaphambili kwe-30% kwaye unoku-odola inqanawa okanye sikuncede u-odole ngenqanawa. Xa iimpahla zigqityiwe, siya kulayisha ikhonteyina. sihlawule intlawulo eseleyo kwaye siya kukuthumela i-B / L yoqobo kunye ne-invoyisi yoluhlu.
7.Phi eyona ntengiso yethu iphambili?
IYurophu, uMzantsi Afrika njalo njalo
Itheyibhile yokuthengisa eshushu kunye nesihlalo sokukhusela isihlalo
intengiso eshushu isiciko setafile yesidlo
Ihowuliseyili spandex izihlalo nesembozo ukusetyenziswa umtshato ...
Isembozo setafile yespandex yomtshato okanye yokusetyenziswa kwesidlo
ezithandwayo spandex siko turntable du ...